मधुमेह र ‘कालो ढूसी’ कसरी सम्बन्धित छन् ?
मधुमेह र ‘कालो ढूसी’ कसरी सम्बन्धित छन् ? मधुमेहकै कारण भारतमा कालो ढूसीको संक्रमण बढिरहेको हो ?
बाह्रखरी - मंगलबार, जेठ २५, २०७८
बीबीसी । भारतमा ‘कालो ढूसी’ या ‘म्युकोरमाइकोसिस’ झन्डै १२ हजार जनामा देखिएको रिपोर्ट गरिएको छ जुन विशेषगरी कोभिड–१९ बाट ठीक भइरहेका बिरामीहरुमा देखा परिरहेको छ ।
यो गम्भीर संक्रमण वास्तवमा एकदमै दुर्लभ मानिन्छ जसको मृत्युदर ५० प्रतिशत रहेको छ । स्वास्थ्यविदहरुले भारतमा यो संक्रमण बढ्दै जानुका पछाडि डाइबेटिज अर्थात मधुमेहको उच्च व्यापकता भएको बताइरहेका छन् ।
अन्य कुन कुन देशमा छ ‘ब्ल्याक फंगस’ या कालो ढूसी ?
कोभिड महामारी सुरु हुनु भन्दा अगाडि ‘म्युकोरमाइकोसिस’ कम्तीमा पनि ३८ वटा देशहरुमा देखा परेको रिपोर्ट छ । यसमा पनि भारत र पाकिस्तानमा यसको संक्रमण दर सबैभन्दा उच्च रहेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फंगल एजुकेसनका अनुसार भारत र पाकिस्तानमा वार्षिक प्रति दश लाखमा १४० कालो ढूसीका संक्रमित भेटिने गरेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ म्यान्चेस्टरका डाक्टर डेभिड डेनिङ फंगल संक्रमणका विज्ञ हुन् र उनका अनुसार महामारी अगाडि नै भारतमा कालो ढूसीको संक्रमण विश्वकै सबैभन्दा उच्च थियो । उनी भन्छन्, “म्युकोरमाइकोसिस’ लाई कमजोर रुपमा नियन्त्रित मधुमेहसँग सीधै जोडिने गरिएको छ र भारतमा मधुमेह अत्यन्तै व्याप्त छ ।”
यो संक्रमणबारे विश्वव्यापी अध्ययन गरिरहेको हालैको रिसर्च पेपरका अनुसार कालो ढूसीबाट संक्रमित कोभिड–१९ बाट ठीक भइरहेका ९४ प्रतिशत बिरामीमा पहिलेदेखि मधुमेह थियो । र यसमा पनि कालो ढूसीबारे रिपोर्ट गरिएका ७१ प्रतिशत बिरामी भारतबाट रहेका छन् ।
के अन्य मुलुकहरुमा पनि यसलाई मधुमेहसँग जोडिएको छ ?
ठूलो सङ्ख्यामा मधुमेहका रोगी भएका अन्य देशहरुमा पनि कालो ढूसीबारे खबर गरिएको छ । जस्तै भारतकै छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि मधुमेह उच्च स्तरमा व्याप्त छ र उनीहरुले कालो ढूसीबारे रिपोर्ट गरेका छन् तर सो सङ्ख्या एकदम थोरै छ ।
बंगलादेशमा अहिले डाक्टरहरुले कालो ढूसी संक्रमणका एक बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् भने अर्का एकजनाको परीक्षणको नतिजा पर्खिरहेका छन् । डाक्टरहरुले बीबीसीसँग बताए अनुसार ती दुवै बिरामीमा मधुमेह थियो ।
त्यस्तै पाकिस्तानले पनि पछिल्ला केही हप्तामा कालो ढूसी संक्रमणका पाँच बिरामीबारे खबर गरेको छ । ब्राजिलले अहिलेसम्म २९ त्यस्ता बिरामीबारे खबर गरेको छ तर ती मध्ये कतिमा कोभिड थियो या मधुमेह थियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन ।
यता रुसले पनि केही समय अगाडि कोभिडका बिरामीमा कालो ढूसी संक्रमण देखिएको रिपोर्ट खबर गरेको हो तर कति जनामा भन्ने चाहिँ स्पष्ट जानकारी दिएको छैन ।
अमेरिकामा पनि मधुमेह रोगीको व्यापकता अधिक उच्च रहेको छ । ९.३ प्रतिशत अमेरिकी जनसङ्ख्यामा मधुमेहको अवस्था रहेको बताइएको छ । त्यस्तै कोभिड संक्रमितको सङ्ख्या पनि अमेरिकामा विश्वकै उच्च रहेको छ । तर त्यहाँ कालो ढूसीको संक्रमण भने एकदमै दुर्लभ पाइएको छ । यस पछाडिको कारण के हुन सक्छ भने, अमेरिकामा मधुमेहको स्थितिलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ र केबल ३ प्रतिशतमा मात्र यसको पहिचान नभएको या उपचार प्राप्त नगरेको राष्ट्रिय निकाय सिडीसीको भनाइ छ ।
मधुमेह किन जोखिमको कारण बन्न सक्छ ?
स्वास्थ्यविद्हरुका अनुसार पत्ता नलागेका या पहिचान नभएका मधुमेहको अवस्था नै यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बनिरहेको छ ।
आइडीएफको प्रक्षेपण अनुसार भारत, नेपाल, बांग्लादेश र श्रीलंकामा ५७ प्रतिशत मानिसमा मधुमेह पहिचान भएकै हुँदैन ।
त्यस्तै पाकिस्तानमा पनि पत्ता नलागेको मधुमेहको अवस्था एकदमै उच्च दरमा पाइन्छ ।
डाक्टर हरिप्रसाद प्रकाश भन्छन्, “भारतमा मधुमेहको अवस्था अनियन्त्रित छ किनकी त्यहाँ प्रायः मानिसहरुले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने गर्दैनन् । ”
उनका अनुसार अधिकांश मानिसहरुले अन्य कुनै जटिल स्वस्थ्य समस्या आइपरेपछि मात्र त्यसको उपचार गराउँदै गर्दा मधुमेह भएको चाल पाउने गरेका छन् ।
यसरी पत्ता नालगेको र नियन्त्रणमा नरहेको मधुमेहको अवस्थाले केही संक्रमण सामु बिरामीलाई उच्च जोखिममा पारिरहेको हुन्छ । तिनै संक्रमणमा कालो ढूसी पनि पर्दछ ।
अफ्रिकी क्षेत्रमा पनि मधुमेह पहिचान नहुने दर अति उच्च रहेको छ तरपनि कालो ढूसीको संक्रमण भने न्युन देखिन्छ । डाक्टर डेनिङका अनुसार वास्तवमा त्यहाँ म्युकोरमाइकोसिसका संक्रमितहरु भएर पनि पत्ता नलागेकाले यस्तो भइरहेको छ । उनले थप भने, “यो सजिलै पहिचान गर्न सकिने रोग होइन ।”
अरु केले गराउन सक्छ कालो ढूसी संक्रमण ?
स्वास्थ्यविद्हरुका अनुसार कोरोनाका बिरामीहरुको उपचारमा स्टेरोइडको असिमित प्रयोगलाई पनि कालो ढूसी संक्रमणसँग जोड्न सकिन्छ । भारतमा अहिले ‘डेक्सामिथेसोन र मिथाइलप्रेडनाइसोलोन’ यी दुई स्टेरोइड कोरोनाका बिरामीको उपचारमा ठूलो स्तरमा प्रयोग गरिएको छ । तर पछिल्लो समय बिरामीको चाप र थकानले अस्पताल र डाक्टरहरु ग्रस्त बन्न पुग्दा स्वास्थ्यकर्मीको निरीक्षण बिना पनि स्टेरोइडको प्रयोग भइरहेका थुप्रै प्रमाण भेटिएका छन् ।
यही कारण भारतीय स्वास्थ्य निकायहरुले डाक्टरको सल्लाह बिना आफैँ औषधि र स्टेरोइड नलिन सबैलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । यसको परीणाम वास्तवमै गम्भीर हुन सक्ने डाक्टर डेनिङ बताउँछन् ।
बेलायतमा गरिएको ट्रायलमा डेक्सामिथेसोन स्टेराइडले मृत्युदर घटाउनमा मद्दत गर्न सक्ने र गम्भीर संक्रमितहरुको ज्यान बचाउन सक्ने देखिएको छ तर अर्कोतर्फ यही स्टेराइड हलुका संक्रमण भएकाहरुलाई चाहिँ हानिकारक साबित हुने पनि पत्ता लागेको हो । यस रिसर्चमा अस्पतालको वातावरणमा स्टेरोइडको प्रयोगबारे जाँच गरिएको थियो । तर भारतमा यतिबेला केही स्टेटहरुले डेक्जामेथोनोन सहित अन्य आइसोलेसनका स्वास्थ्य सामग्रीहरु सर्वसाधारणमा वितरण गरिरहृका छन् ।
डाक्टर डेनिङ भन्छन्, “धेरै स्टेरोइड कहिल्यै पनि राम्रो होइन भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ ।”
युकोरमाइकोसिसले विशेषगरी हाम्रो साइनस, मस्तिष्क र फोक्सोमा असर पार्ने गर्दछ र मधुमेह, क्यान्सर, एड्सलगायत कमजोर प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका बिरामीका लागि प्राणघातक पनि हुन सक्छ ।
मंगलबार, जेठ २५, २०७८ मा प्रकाशित
बीबीसी । ब्राजिलमा कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित मृत्युको संख्या पाँच लाख पार गरेको छ । यो भनेको विश्वकै दोस्रो ठूलो मृत्युको... ७ मिनेट पहिले
वासिङटन । उत्तर कोरियाली प्रमुख किम जोङ उनले अहिले अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग वार्ता गर्नुभन्दा धेरै ठूला समस्याको सामना गर्नुपरेको... ३८ मिनेट पहिले